एनएमबी बैंक लिमिटेड कम्पनी विश्लेषण - Aathikbazarnews.com एनएमबी बैंक लिमिटेड कम्पनी विश्लेषण -
creative writing love story anti-hero creative writing alien invasion creative writing creative writing masters dublin university of victoria creative writing faculty boston university creative writing masters asastudent how can you help the environment essay creative writing mfa program rankings how to earn money through creative writing best universities for creative writing in europe www content writing service doing your child's homework hire someone to write essay traducir do my homework anglo saxon facts primary homework help uw creative writing program creative writing course kingston university creative writing describing fire images for creative writing prompts exercising regularly helps reduce stress essay doing dissertation last minute purple hibiscus creative writing workshop columbia university phd creative writing sarah lawrence creative writing faculty apps that will help you with your homework creative writing mfa programs in oregon best netflix shows to watch while doing homework 14 creative writing best written job application letter research paper introduction maker
बैंकले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म रु. २ अर्ब ५१ करोड ६४ लाख ८७ हजार खुद नाफा गरेको छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष बैंकको नाफा ८७ दशमलव ८० प्रतिशतभन्दा बढी भएको हो । यस अवधिसम्म बैंकको वितरणयोग्य नाफा भने रु. २ अर्ब २७ करोड ५७ लाख ८९ हजार रहेको छ ।
गत वर्ष यो अवधिसम्म बैंकको वितरणयोग्य नाफा रु. ५८ करोड ७७ लाख ८ हजार थियो । १७ प्रतिशत बोनस शेयरपछि बैंकको चुक्ता पुँजी रु. १६ अर्ब ३२ करोड ५९ लाख ६१ हजार पुगेको छ ।
यस वर्ष जगेडा कोष रकम रिटर्न अर्निङसहित ५ दशमलव ९४ प्रतिशत बढी रु. ७ अर्ब ३९ करोड ९१ लाख ८१ हजार कायम भएको छ । निक्षेप संकलन गत वर्षभन्दा १८ प्रतिशतभन्दा बढी रु. १ खर्ब ५५ अर्ब ३५ करोड ९२ लाख १८ हजार गरेको बैंकले २८ दशमलव १९ प्रतिशत बढी रु. १ खर्ब ४८ अर्ब २७ करोड २४ लाख ९० हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
यस वर्ष निष्क्रिय कर्जा अनुपात २ दशमलव ४८ प्रतिशतदेखि घटेर १ दशमलव ९७ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी रु. २० दशमलव ६४ रहेको छ । बिहीवार बैंकको अन्तिम शेयर मूल्य रु. ४४२ कायम भएको छ ।